Ndị ọkachamara na Semalt kọwara ihe bọtịnụ maka ebe nrụọrụ weebụ bụ Spam Is
Buttons-for-website.com bụ ebe nrụọrụ weebụ a ma ama nke gosipụtara na ndepụta ndị nchịkọta akụkọ Google Analytics, n'agbanyeghị na ọ dịghị ezitere gị okporo ụzọ. Ị nwere ike ịhụ nleta ụfọdụ, ha niile nwere ọnụego 100% na efu elekere gara aga na ebe nrụọrụ weebụ gị. Bọtị maka ebe nrụọrụ weebụ bụ otu n'ime saịtị ndị ahụ na-eme ka ndị ọrụ na spam na-ezo na otu ụzọ ma ọ bụ nke ọzọ. Echiche bụ iji melite ogo nke weebụsaịtị ya site na ịnye saịtị gị na ịzụ ahịa ọjọọ na ọtụtụ nleta dị ala. Ndị spammers na ndị na-agba ọsọ na-atụ anya na ha ga-emepụta ego site na aghụghọ a, na bọtịnụ-for-website - como hacker un servidor web iis.com na-ebipụta ndepụta nke ndị na-ezigara ya kachasị mma ịghọgbu ndị ọrụ na ịntanetị. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ SEO na-etinye aka n'ichegharị ma kwere nkwa ịkwalite okporo ụzọ gị n'ime ụbọchị, ọ nwere ike itinye aka na usoro oji SEO ma ọ ga-eme ka ndị ahịa nweta ụgwọ ya.
Ọ bụrụ na ị nwere saịtị ma lekwasị anya na akaụntụ Google Analytics, ohere bụ na saịtị gị na-enweta hits site na bọtịnụ-for-website.com. Ọ bụghị ebe ziri ezi na-esi enweta okporo ụzọ ma bụrụ nke a ga-ewepụ ngwa ngwa.
Gbalịa mee ihe ngosi ndị dị mkpa site na ọkachamara Semalt , Jack Miller.
Darodar Ntụziaka Spam:
Ka m kwuo ebe a na bọtịnụ-for-website.com na Darodar. Ohere bụ na ị kwụrụ ụgwọ onye si Darodar ma malite ịpụta na stats na-ezo. Weebụsaịtị bọtịnụ ga-eme otu ihe ahụ na saịtị gị, na spam ndị na-edekọ aha na-egosi na akaụntụ Google Analytics ga-eme ka hà bụ ndị ziri ezi..Ọ bụrụ na ị pịa ya, ị ga-ahụ ọtụtụ nleta na-abịa na saịtị gị. Onye na-ezo aka abụghị onye dị adị mana bot na-eme ka ọ bụrụ mmadụ. Ọ chọrọ ka ị gaa na saịtị ya kwa ụbọchị ka o nwee ike ịnye ego ụfọdụ.
Onye na-edechite ọnụ Spam abụghị naanị ihe efu:
Nchedo ya na-ekwu na spam na-elekarị anya dị ka ntakịrị mkpasu iwe, ma ọ bụghị ya n'ihi na nke a nwere ike ọgbaghara data Google Analytics ma nwee ike ịmepụta ihe ọ rụpụtara ruo n'ókè. Ya mere, ọ na-arụ ọrụ dị oke mkpa n'ibibi saịtị gị ma mee ka ọnụọgụ ọnụ gị dị elu. Mgbe Darodar malitere mkpọsa spam ya, ndị ahịa na-akọ na ebe nrụọrụ weebụ ha nọ na-eti ọtụtụ puku ugboro kwa ụbọchị. Mgbe ụfọdụ, saịtị ha natara ọtụtụ nkwụsị nkeji ọ bụla, nke bụ ihe na-abụghị ihe okike. Ọ na-eme ka arụmọrụ dị iche iche na saịtị ndị ha na-elekwasị anya, na-eme ka saịtị ahụ ghara ịdị adị n'ụbọchị. Ọzọkwa, o mere ka oge nzaghachi ahụ daba adaba.
Olee otú igbochi spam na-edekọ ihe?
Ọ bụrụ na ịnweta spam na-edekọ aha na saịtị gị, ọ bụ oge iji gbochie ya tupu azụmahịa gị kpamkpam. N'ụzọ dị mma, e nwere ụzọ ụfọdụ iji gbochie spam ozi ntụgharị, dị ka idezi faịlụ .htaccess na iji ngwa mgbakwunye WordPress.
Dezie faịlụ .htaccess gị:
I kwesịrị idezi faịlụ .htaccess nanị mgbe enweghi nhọrọ ọzọ. Nke a bụ faịlụ dị na sava weebụ gị ma enwere ike iji ya maka nzube dị iche iche. Ọ bụrụ na ị maghị ihe ọ bụla banyere otu esi edezi ya, nhọrọ kachasị mma bụ ịgwa ndị nnọchianya ụlọ ọrụ gị, ha ga-edezi ya maka gị.
The WordPress ngwa mgbakwunye:
Ọ bụrụ na ị wuru saịtị gị na WordPress, ị nwere ike irite uru na ntanetị ole na ole nke na-enyere aka igbochi spam onye ntụgharị. Wordfence bụ otu n'ime plugins kasị mma. O nweere onwe ya iji ma bara ezigbo uru. O nwere ọtụtụ nhọrọ na atụmatụ iji nweta uru site na. Iji gbochie spam na-edekọ ihe, ị ga-aga na nhọrọ nkwụsị elu ma gwa onye na-ezigara onye na-ezigara ya ihe ọma n'oge ndụ.